Last Updated on Monday, 29 April 2019 12:31
यसकारण हुन् लखन थापा मगर प्रथम सहिद !
- त्रिलोक सिंह थापा मगर
१) जङ्ग बहादुरको एकतन्त्रीय, निरकुंश तथा पारिवारिक शासन प्रणाली विरुद्ध वि.सं. १९२७ मा शखनाद गर्ने प्रथम शहीद लखन थापा द्वितीयले आफूले नेतृत्व गरेको विद्रोह एव विरोधको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू जनसमक्ष यस प्रकार राख्ने गरेका थिए ।
“जङ्ग बहादुरले नेपाल म्लेच्छलाई बेच्यो दुनिया त्राही त्राही पारिरहेछ ।
जङ्गेलाई हटाएर नेपाल आमालाई पापको बोझबाट हलका पार्नु पर्दछ । नेपालमा सत्ययुग फिराउ, जगदम्बा काली माताले मलाई बरदान दिएकी छिन्, भाइ हो तयार होऔं” (भीम भक्तमान सिंह २००५) जङ्ग बहादुरको तानाशाही शासन विरुद्ध गरिएको सशस्त्र विद्रोहको उक्त उद्देश्यहरू पूर्णरुपमा राजनैतिक परिप्रेक्षमा रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि (क) लखन थापा द्वित्तीयले त्यही बेला देखि नै विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए । (ख) जङ्ग बहादुरको हुकुमी तथा पारिवारिक शासन प्रणाली बाट जनता त्राही त्राही भइ सकेको हुदाँ सो प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याई “सत्ययुग” अर्थात प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सिर्जना गर्ने ।
२) उपरोक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि उनिले मुख्यतः तीनवटा रणनीतिहरू प्रयोग गरेका थिए । ९क० धर्म, पुर्नजन्म, अन्धविश्वास तथा मनोकामना देवी माथि प्रगाढ तथा अटूट आस्था र निष्ठा राख्ने तत्कालीन जनता एंव समाजलाई आफ्नो आन्दोलनको पक्षमा परिचालन गर्न गराउन देवी माताको वरदान प्राप्त भएको भनेर प्रचार गर्ने गरेका थिए । फलस्वरुप जनताको स्वतः स्र्फूत सक्रिय सहयोग एंव संलग्नता प्राप्त गर्न उनी सफल भए । (ख) जनताको सक्रिय सहयोग र सहायताको आधारमा व्राहमण क्षेत्री गुरुङ्ग मगर तथा अन्य जातिको दुई हजार युवाहरूको जनमिलिशिया, आफ्नै किल्ला, शस्त्र अशस्त्र , खाद्यान्न तथा युद्धकलाको प्रशिक्षण समेतको व्यवस्था छोटो अवधिमा गर्न गराउन सफल भए । ९ग० हुकुमी एंव तानाशाही शासनलाई ध्वस्त पार्न राजनीतिक संगठनको पनि आवश्यकता पर्दछ भनेर जोशमनि सम्प्रादायलाई राजनैतिक संगठन र राजनैतिक दलको रुपमा परिचालन गरे । साथै राजनैतिक चेतना सिर्जना गरे ।
३) यसै क्रममा इतिहासकार प्रमोद शमशेर राणाले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्, “राणाहरूको विरुद्ध यो पहिलो विद्रोह थियो । यसभन्दा पहिले कसैले राणाहरूको विरुद्ध औला उठाएको देखिएन ।” (इ.सं. १९९५० )जङ्ग बहादुरको छोरा पदम जङ्गले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ, “नेपालमा सुनौलो युग आरम्भ गर्ने लखन थापाको योजना थियो ।” (ई.सं. १९७००यसै क्रममा लखन थापा द्वित्तीयलाई विद्रोही राजाको संज्ञा दिदै फ्रान्सेली विद्वान मेरी टिलौइनले आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ, “सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोहका विद्रोहीहरू संग संप्रक भए पछि उनीले आफ्नो राजनैतिक मोडेल योजनाको तर्जुमा गरेका हुन् ।” (इ.सं. २०००)
४) लखन थापा द्वित्तीयले नेतृत्व गरेको जनविद्रोह भन्दा पहिले तथा त्यस पछि पनि जंङ्ग बहादुरलाई मार्ने प्रयास भएको पाइन्छ । विशेष गरि सत्ताबाट च्यूतभएका चौतारी, काजी, भाई भरदारहरूले पुनः सत्ता प्राप्त गर्न, बदलाको भावना, पारिवारिक, व्यक्तिगत रीसइवी आकांक्षा र आवेशका कारणहरूबाट जङ्ग बहादुरको हत्या गर्ने गराउने असफल षड्यन्त्र प्रयास भएका थिए । राजा सुरेन्द्रको हत्या गरेर जङ्ग बहादुरलाई फसाउने षड्यन्त्र वि.सं. १९०२ मा वीरध्वज वस्नेतले गरेका थिए । त्यस्तै जङ्ग बहादुरको आफ्नो भाई बद्रिनरसिंह कुवर, काकाको छोरा जय बहादुर कुवर साथै करवीर खत्री तथा भोटु सिंह बस्नेत आदिले पनि सत्ता प्राप्तिका लागि वि.सं. १९०७ उन्को हत्या गर्ने असफल योजना र षडयन्त्र गरेका थिए ।
५) सन् १८५१ को मुलुकीऐन लागु भए पछि जनजातिहरूको सामाजिक स्तर तल झरेको थियो । जनजातिहरू जङ्ग बहादुरको पारिवारिक एवं तानाशाही व्यवस्था बाट रुष्ट एंव असन्तुष्ट थिए । यसै क्रममा आदिवासी जनजातिका केही असन्तुष्ट युवाहरूबाट जङ्ग बहादुर राणाको विरुद्ध सैनिकहरूलाई विद्रोह गर्न उत्तेजित पार्न, जङ्ग बहादुरको हत्या तथा सत्ता पल्टाउन असफल प्रयास भएको थियो । सो प्रयासमा संलग्न, वि.सं. १९३३ मा सुकदेव गुरुङ्ग र श्रीपति गुरुङ्गको हत्या जङ्ग बहादुरको निर्देशनमा गरिएको थियो । वि.सं. १९३४ सालमा राणा शासनको विरोध गर्ने सुपति गुरुङ्ग भने पक्राउ पर्न सकेनन् । जनजातीका उक्त शहादत प्राप्त शहीदहरूको राज्यले यथोचित सम्मान गर्नु पर्दछ ।
६) सम्पूर्ण जन संख्याको तुलनामा दुई हजार युवाहरूको जन मिलिशिया तयार गर्न तथा राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान गर्न त्यसवेला सानो कुरा थिएन । जनताले लखन थापा द्वित्तीयलाई राजा सरह मान्न थालेका थिए । यसै सन्र्दभमा इतिहासकार रेग्मी अनुसार, “ लखन थापा द्वित्तीयको योजना राजा सुरेन्द्रको कान्छो भाईको छोरालाई राजा बनाउने रहेको थियो । कालान्तरमा आफै राजा बन्ने पनि थियो । (रेग्मी १९८०)
७) वर्तमान समयमा सेनामा जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता आन्तरिक वैदेशिक प्रशिक्षण, नेतृत्व र कार्यदक्षताका आधारमा मुल्याङ्कन गरेर प्रायः पदोन्नति गर्ने चलन रहेको छ । जङ्ग बहादुरको हुकुमी शासन व्यवस्थामा वच्चा जन्मिदै जर्नेल, कर्नेल तथा कप्तान हुन सक्ने चलन थियो । जङ्ग बहादुर आफै कप्तान पदबाट प्रधान मन्त्रि भएको हुन् । कप्तान लखन थापा द्वित्तीय भारतको अलमोडामा प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरेका मगर जनजातिका युवक थिए । मगर पल्टनमा आफ्नो सामरिक क्षमता, योग्यता, अनुभव खस खुसियात उपयुक्त निर्णय तथा नेतृत्व गर्ने शीपको प्रदर्शन गरेको हुदाँ १४ वर्ष छोटो अवधिमा एउटा सिपाहीबाट कप्तान हुन सक्ने(वि.सं. १९२५० कुनै अप्ठ्यारो थिएन । हुकुमी शासनमा हुक्म नै पदोन्नतिको मुख्य आधार थियो । घर विदामा बसेर जनविद्रोहको रणनीति तर्जुमा गर्नु एउटा सिपाहीलाई चानचुने कुरा थिएन ।
छ सात वर्ष सम्म राणाहरूको विरुद्ध जनयुद्धको नेतृत्व प्रदान पार्न सक्ने लखन थापा द्वित्तीयको बारे इतिहासकार सूर्यमणि अधिकारीको भनाई यस प्रकार छ, “लखन थापा द्वित्तीयलाई नेपालमा जागरणका अग्रणी रुपमा प्राय : विद्वानहरूले स्विकार गरेका पाउँछौ” (वि.सं. २०५४) अतः वैयक्तिक एंव व्यक्तिगत रुपमा विरोध र विद्रोह गर्नु भन्दा पनि स्थानीय जनतालाई प्रभावित पारी संगठनात्मक तथा योजना वद्धरुपमा सत्ययुग ल्याउने लक्षअनुरुप राजनीतिक रणनीति तयार पारि शसस्त्र युद्ध समेत गर्न तत्पर रही आठ आठ जनाले प्राण गुमाउन पुगेका घटनाको नायक लखन थापा द्वित्तीय नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पहिलो सहादत प्राप्त गर्ने शहीद (वि.सं १९३३) हुन ।
८) जन् दबाव ले गर्दा राज्य ले उनीलाई प्रथम शहीद घोषणा गर्यो रतर राज्यको विभेदपूर्ण नीतिले गर्दा आज सम्म उनलाई उपुक्त र उचित सम्मान दिया को देखिन र सरकारी छापा मा तथा सरकारी सहिद दिवस मा जामा चार जना सहिद को तस्विर देखिन् छन् र प्रथम सहिद लखन थापा को फोटोखोजादा पनि कतै भेटिदैन ? प्रथम सहिद को सम्मान मा सरकारी बिदा पनि छैन र जसले प्रथम पटक प्रजतन्त्र को बिउ रोपों नेता हरु ले फल खाँदै छन् तर उनि महान प्रथम सहिद लाई भुल्दै छन् र यहि हो याँहा को चाला ??
(८५ बर्षिय त्रिलोक सिंह थापा मगर मास्टर मित्रसेन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ) ।
Last Updated on Sunday, 17 February 2019 06:56
विश्व आदिवासी दिवस - २०७५ र सम्झनामा स्व. गोरे बहादुर खपांगी !
बि.के राना मगर / बोस्टन,यू.एस.ए
फोटो: फाईल बाट
आज यतिखेर, नेपाल (काठमाडौँ)मा अगष्ट ९ , २०१८ अर्थात् विश्व आदिवासी दिवस - २०७५ (World's Indigenous Peoples Day 2018) बिभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाईदैछ होला पक्कै पनि ।
यस सिलसिलामा , सम्बत् २०५७ साल साउन २४ गते मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको दुई लिम्बू महिलाको शिरफूल र अन्य पहेंलपुर गहनाले झकी-झकाऊ, एउटा सुन्दर फोटो छ मेरो अगाढी अहिले यतिबेला ।
त्यसबेलाको पुराना कुरा - स्व. गोरे बहादुर खपांगीको याद आइरहेछ यहाँ अहिले झल्झल्ती !
त्यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवस र नेपाल जनजाति महासंघको तेश्रो महाधिवेशनका सिलसिलामा २०५७ साल साउन २२ गते काठमाडौँ ठमेलस्थित डि. बि. पुन (मनकामना हेलिकप्टर प्रा.लि.)को Center Point Hotel मा नेपालका जनजाति अगुवाहरुको एउटा अपर्झट अत्यन्त जरुरी बैठक बसेको थियो । त्यो बैठक डा. हर्क गुरुङको (एकप्रकारले अघोषित) अध्यक्षतामा बसेको थियो । डा. हर्क गुरुङको दाहिनेपट्टि प्रा. कमल प्रकाश मल्ल बस्नु भएको थियो भने देब्रे पट्टि स्व. खपांगी । अनि स्व. खपांगीको देब्रे पट्टि थिएँ म ।
त्यो बैठक अर्थात् 'मिटिंग' निक्कै गरमागरम बहसकासाथ चल्दै थियो - जनजातिहरुको मिटिंग न जो ठहरियो ! विशेष गरेर एकजना धिमालजी (उहाँको पुरा नाम भुलेछु अहिले) र बालकृष्ण माबोहांगको प्रश्तुतीमा त्यसबेलाका नेपाल जनजाति महासंघका महासचिव परशुराम तामांग, जो त्यसैदिन (?) लण्डनदेखि सो मिटिंगमा भाग लिन आउनु भएको थियो, ले निक्कै चर्को प्रतिवाद गर्नु भयो
। हालै दार्जीलिंगका एकजना नेता विनय तामाङ्गको भाषणको शैलीमा - त्यो मिटिंग पनि चर्कदै , चर्कदै गयो । र, त्यो मिटिंग रातको ९ बजे त्यत्तिकै टुंगियो पनि । अनि घरतिर हिडे सबैजना ।
त्यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवस काठमाडौँमा अत्यन्त भव्यताका साथ मनाउने उद्धेश्यले एउटा 'तदर्थ राष्ट्रिय समिति' बनेको थियो । नेपाल मगर संघका तत्कालिन अध्यक्षका हैसियतले सो समितिका संयोजक हुनुहुन्थ्यो - स्व. गोरे बहादुर खपांगी । अहिले संघीय संसद बसेको त्यसबेलाको बिरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहको मुख्य हलमा विश्व आदिवासी दिवस - २०५७ मनाइने तय भएको थियो र हलको भाडा रु. १ लाख तोकिएको थियो । राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिले हल भाडा तिरिदिने कुरो गरेको थियो तर स्थानीय विकास मन्त्रालयले पैसा अझै पठाईसकेको थिएन ।
त्यसदिन राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक डा चैतन्य सुब्बाको कार्यक्षमा स्व. खपांगी,मन्जुल याक्थुम्बा, ताम्ला उक्याब लगायत हामीहरु सबैजना थियौ । 'टिरिंग टिरिंग', 'टिरिंग टिरिंग' फोनको घन्टी बज्यो । मैले नै उठाएको थिएं त्यो 'कल' । "भरे ५ बजे सम्म हल भाडा नबुझाए बुकिङ्ग क्यान्सिल हुनेछ ।" - बडो आदेशात्मक शैलीमा बोलियो उताबाट !
हतार हतार स्व. खपांगीले कर्णाली एयर्लाइन्सका नारायण सिंह पुनसंग सम्पर्क गर्नु भयो । त्यसपछि उहाँले (नारायण सिंह पुनले) विश्व आदिवासी दिवस मनाउने र नेपाल जनजाती महासंघको तेश्रो महाधिवेशनको उदघाटन कार्यक्रमका निम्ति रु. १ लाख सापटी पनि दिईहाल्नु भयो । सो रकम त्यसै दिन ५ बजे भित्र स्व. खपांगीले लगेर बुझाउनु पनि भयो । बल्ल हो बा ! बा ! भए जनजातिका सबै अगुवाहरु । नत्र कता गएर गर्नु भोलि कार्यक्रम ?!?
स्व. खपांगीको संयोजकत्वमा त्यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवस एवं नेपाल जनजाति महासंघको तेश्रो महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम अत्यन्त भव्य तरिकाले सम्पन्न भयो काठमाडौँमा । शायद त्यस ढंगले - 'न भूतो न भविष्यति' !
नेपालमा त्यो हिसाबले आजभोलि पनि विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ कि मनाईदैन मलाई थाहा छैन ।
(फोटोहरु: ज्ञान थापा मगर - बुटवल , रघु थापा मगर र जिवन थापा मगर - काठमाण्डौ )।
Last Updated on Thursday, 09 August 2018 08:52
हिन्दुधर्मलाई "काे" र "के"बाट खतरा ?
हिन्दुधर्मलाई स्वार्थी बाहुन बाटै खतरा छ ।
___ बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
हिन्दुधर्मकाे अस्तित्वमा निम्म तत्वहरू खतरा हुन् :
क) स्वार्थी बाहुन
हिन्दुधर्मलाई काेहीबाट खतरा छ भने त्याे हिन्दुधर्मकै केही स्वार्थी बाहुनहरूबाट नै छ । नेपालमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका ९८(98%) प्रतिशत चर्चका प्रमूख बाहुनहरू नै छन् । क्रिश्चयनधर्मका नाममा देशविदेश भ्रमणमा जाने बाहुनहरू नै छन् । क्रिश्चयनधर्मकाे नाममा चलखेल हुने रकम उनीहरू कै हातमा छन् । तस्विरमा लेखक चाम्लिङ ।
विदेशी रकम विभिन्न एनजिओ/आईएनजिओ मार्फत नेपालमा आउछन् ।ती एनजिओ/आईएनजिओका प्रमूख बाहुनहरू नै हुन्छन्।
राेदीघरका घले डनलाई हाेइन; बिष्टहरूकाे लुगा सिलाउने दर्जीलाई हाेइन; भैसी चराउने राईलाई हाेइन; मैच्याङ र च्याङ्वाकाे धुनमा रम्ने जाेसिला तामाङलाई हाेइन; धाननाचकाे लिम्बु हिराेलाई हाेइन र हाम्राे कपाल काटिदिने, तरकारी घरघरमा ल्याएर खुवाउने, जुत्ता पालिस गरिदिने, घरवरिपरिका कबाडी साफ गरिदिने र सुट सिलाई दिने श्रमिक मधेसीलाई हाेइन, उनै सिहदरबार थर्काएर बस्ने बाहुन नाईकेहरूलाई नै विदेशीले पनि पत्याउने हाे र उनीहरूले नै खाेलेका संघ/संस्थालाई उनीहरूले "डाेनेसन/फण्ड" निर्माण गरिदिने हाे ।
जनजाति र उस्ले खाेलेकाे संस्थालाई विदेशीले पनि नपत्याउने भएकै हुदा एक गुरूङकी छाेरी बाहुनकाे थरमा चिनिएर "माईती नेपाल" चलाएर बसेकी थिइन । उनीले अफूलाई अनुराधा काेइराला नभनेर अनुराधा गुरूङ भनेकी भए उनकाे संस्था पनि चल्ने थिएन । क्रिश्चियनधर्मकाे ठूलाे प्रचारक त तत्कालिन व्यवस्थािपिका-संसदमा बहालवाला सदस्य थिए । उनी शुद्ध ढकाल बाहुन हुन् । उनी त्यहि संसद सदस्यबाट तत्कालीन सरकारका मन्त्री पनि भएका थिए । राज्यसत्ता र विदेशी पैसाकाे आडमा क्रिश्चियनधर्मकाे प्रचार गर्ने आखिर याे मुलुकमा बाहुन नै छन् ।
यसरी सत्ताधारी जाति बाहुनहरूकै हातमा एनजिओ/आईएनजिओ हुने भएकाे हुदा दलित, मधेशी र जनजातिले बिदेशी पैसा खाएर हिन्दुधर्मलाई विनास गर्न खाेज्दैछन भन्नु हास्यस्पद अर्तनाद हाे । धर्मनिरपेक्षता, पहिचान र संघीयता माग्ने आदिवासी, दलित र मधेसीकाे कारण हाेइन, बरू उनै स्वार्थी बाहुनकाे कारण हिन्दुधर्मकाे हुर्मत गरिदैछन् । दलित र जनजातिहरू जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाइएलाकी भनेर क्रिश्चियन भाका छन् भने बाहुनहरू पैसाकाे लागि ।
ख) जातीय छुवाछुत र विभेद
हिन्दुधर्ममा भएकाे कट्टरपन संस्कार अन्तत: हिन्दुधर्मलाई नै हानी हुने कुरा हाे । हिन्दुहरूमा जस्ताे जातीय छुवाछुत अन्य धर्ममा हुन्न । बुद्धिष्ट, क्रिश्चयन र मुस्लिम धर्ममा लाग्नेहरूमा विभेद हुन्न । ती धर्मशास्त्रमा निपुण हुने वित्तिकै ती धर्मकाे कर्मकाण्डमा जाेसुकै पुरेत तथा पुजारी हुन सक्छ । तर हिन्दुधर्ममा त्याे हुन्न । कुनै दलित हिन्दुधर्मशास्त्रकाे पारङ्गत भए पनि उस्लाई बाहुन समाजकाे पण्डित र पुरेतकाे रूपमा स्वीकारिन्न । अरू त परकै कुरा हाे, त्याे काले राई हिन्दुधर्मशास्त्रकाे प्रख्यात बाहुनहरूभन्दा पनि विद्वान भएर जनै भिरेर आफूलाई आर्य भन्दाभन्दै पनि उसलाई बाहुनले घरमा हुलेर पूजारी तथा पुरेत बनाउन चाहेन ।
हाे, यस्ताे विभेदबाट मुक्तिकाे अनुभूति प्राप्त गर्न केही दलित र जनजातिहरूले धर्म परिवर्तन नगरेका हाेइनन् । आफूलाई हिन्दु बनाउदा बनाउदै पनि बाहुनहरूबाटै विभेद खेप्नुपरेपछि त्यसकाे विकल्प के हुनसक्छ ? दलितकाे काेखमा जन्म लिएका हिजाे भारतका महामानव तथा विद्वान भिमराव अम्बेडकर लाखाैंकाे संख्यामा आफ्ना समर्थकहरू सहित त्यसै बुद्घधर्ममा प्रवेश गरेका थिएन । किन हिन्दुधर्म विश्वव्यापी नभएर भारत र नेपालमा मात्रै खुम्चेर रहेकाे छ ? किन हिन्दुधर्ममा आर्यनश्ल(बाहुन) बाहेक अरू नश्लिय जातिहरू आकर्षित हुन सकेनन् ? यसरी भाेली हिन्दुधर्म लाेप हुनसक्ने भयकाे कारण यसलाई राज्यसत्ताकाे सुरक्षाकवच प्रदान गर्न नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य नबनाएर हिन्दुराज्य नै बनाउनु पर्ने जाेड त गरेका हाेइनन्, अतिवादीहरूले ?
गरिवी दशकाे राेग हाे । जनता आफै आफ्नाे कारणले गरिव हुने हाेइन, राज्यसत्ताकाे अवैज्ञानिक नीति तथा कार्यक्रमकाे कारण देश गरिव हुने हाे । नेपाललाई संसारकै गरिब देशकाे सुचिमा राख्ने सत्ताधारी हुन् कि हलाे जाेत्ने किसान हुन ? नेपालकाे सत्ताकाे बागडाेर कस्काे हातमा छ ? राज्यसत्ताकाे राजनीतिक तालाचाबी आफ्नै हातमा भएर पनि कुनै कुराकाे दाेष जनजाति, दलित र मधेसीलाई दिन मिल्छ ? बाहुन त आर्थिक प्रलाेभनमा पर्छ भने सदियाै वर्षसम्म राज्यबाट किनारा लगाइएकाे र विपन्न बनाइएकाे समुदाय स्वाभाविक रूपमा प्रलाेभनमा पर्छन् । हाे, क्रिश्चियन मिसनरीहरूले नेपालकाे गरिवी , विपन्नता र अज्ञानतामा खेलिरहेका छन् । गाँस, वास र कपासकाे प्रलाेभनमा नेपालीहरूलाई क्रिश्चियन बनाइरहेका छन् । याे सबैलाई चुनाैतिकाे विषय हाे ।
वास्तवमा ईशाइधर्म बुद्धधर्मकै "बाई-प्राेडक्ट" हाे भन्ने कुराकाे बाेध गर्न नसक्ने अज्ञानताले पनि यसाे भएकाे हाे । एकातिर समानता र न्यायमूलक प्रतगिशिल समाज निर्माणमा नलागी जातीय विभेद गरिरहने र भ्रष्टाचार गरेर देशमा उन्नति नगरी जनतालाई गरिवीमा रहन वाध्य बनाइरहने; र अर्काेतिर हिन्दुधर्मकाे विरूद्ध चलखेल भाे भनेर राेइकराइ गर्नु भनेकाे गल्ली साफ नगरेर झिंगामात्र मार्ने प्रयत्न गर्नु हाे । फाेहर गल्ली रहुन्जेल झिंगाकाे समस्या रहिरहन्छ । हाे, हिन्दुधर्मकाे फाेहर गल्ली भनेकाे स्वार्थीबाहुन, जातीय विभेद र गरिवी हन् । पहिले यसकाे सफाई हुनुपर्छ ।
बिश्लेषक, लेखक "जातियमुक्ती र लोकतन्त्र", अनुवादक "क्रुसमा नमरेका बौद्धमार्गी जिसस क्राइष्ट"
सचिब - राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ।
Source: फेस्बुक वालबाट
Last Updated on Thursday, 25 October 2018 13:39
स्व. नेता खपांगी यो यूगका यूग पुरुष थिए !
गोरे बहादुर खपाङ्गी मुख्यताः जातीय पहिचानको वकालत गर्नु हुन्थ्यो । उनि प्रायः भन्नु हुन्थ्यो । स्वदेश विदेश जुन सुकै ठाउँमा मगर जनजातीको वसोवास गरेको होस उस्को धर्म, पहिरन, खानपीन र स्वभाव आदिमा समय र ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ तर उस्को जातीय पहिचानमा परिवर्तन हुन सक्दैन” । उनी संधै भन्नु हुन्थ्यो “विसौ शताब्दी त गुम्यो तर २१ औ शताब्दीमा “सिंह दरवार”मा मगर जनजातीको आधिपत्य हुनु पर्छ ।” खपाङ्गीको उक्त उद्घोषणहरु ले उत्पीडित मगर युवाहरु लाई उत्प्रेरणा दिन गरेको छ ।
खपाङ्गीले आफ्नो छोटो अवधिको राजनीतिक अभ्यासमा आदिवासी जगजाति तथा दलित युवाहरुलाई आफ्नो राजनीतिक हक अधिकार माग्न सिखायौँ । भाषा, संस्कृति, परम्परा, रीतिथिती तथा जातीय इतिहासको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न सिखायौँ । जातीय पहिचानका विरोध गर्ने राजनीतिक नेताहरुले पनि खपाङ्गीको उक्त योगदानलाई स्वीकार गर्दछन् । सन् १९७० सालमा रुपमा नेता लेलिनले भन्नु भएको थियो “ जातीय प्रश्न लाई बुर्जर्वा हरुले जस्तै गफको रुपमा होइन, सर्वहारा वर्गको संघर्षको हितको मातहत उठाउनु पर्दछ ।”
गोरे बहादुर खपाङ्गी मगरको व्यक्तित्वको आर्काे पाटो थियो सामाजिक नेतृत्व र सामाजिक नेता । उनी सम्पूर्ण आदिवासी जनजाती तथा मगर जनजातीका सामाजिक अभियन्त थिए । आफ्नो अन्र्तवार्ताको क्रममा भन्नु भयो को थिए “मलाई लाग्दछ जनजाती भन्नुको अर्थ उनीहरु सामाजिक रुपले पछि परेका छन् । त्यस्तो गर्दा उनिहरु लाई सामाजिक रुपले मुक्त कसरी गर्ने त्यो ठोस कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्छ । (छापामा जातीय आन्दोलन पृष्ठ ३४० वि.सं. २०६०) सोही अन्र्तवार्तामा अगाडी भन्नु हुन्छ”
सर्व प्रथम जनजाती लाई योग्य बनाउनु प¥यो । उनीहरुलाई सामाजिक दासता, धार्मिक दासता, समग्रमा मानसिक दासता, बाट मुक्त नगराइकन सरकार को जुनसुकै कार्यक्रममा पनि जनजातीको सहभागिता हुन बहुत गा¥हो हुन्छ ।” ( छापामा जातीय अन्दोलन पृष्ड ३४० वि.सं. २०६०)
नेपाल मगर संघ :
आफ्नो उपरोक्त सामाजिक धारणा बाट प्रेरित भएर खपाङ्गीले नेपाल मगर संघमा वि.सं. २०३६ सालमा सम्भवतः प्रवेश गरे । मगर इतिहासकार नरु थापा मगरले आफ्नो पुस्तक“किरात मगर इतिहास” (२०६७) पाना ७८ मा पहिलो पटक मगरहरुको सामाजिक संस्था मगर सुधार संघ २०१२ बैशाख २६ गते काठमाण्डौ नरदेवीमा स्थापना भएको थियो भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ ।
मगर समाज सुधार संघको परिवर्तित नाम नेपाली लंधाली परिवार संघको २०३९ साल फागुन १५–१६ गते हेटौडामा दोश्रो राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । सो संघको केन्द्रंीय समितिको सदस्य पदमा खपाङ्गी पनि सदस्य चयन हुनु भयो । नेपाली लंघाली परिवारको चौथो अधिवेशन २०४८ सालमा काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो । सो नेपाली लांधाली परिवारको महाधिवेशन मा गोरे बहादुर खपाङ्गी मगर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन भयो । वि.सं. २०४८ देखि २०५९ साल सम्म सो संघ को अध्यक्ष पदको कार्यभार अनवरत रुपमा सम्हाल्नु भयो । उहाँको कार्यकालका केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१) नेपाल लांघाली परिवार को व्यापकता वढाउन, विस्तार गर्न तथा सबै मगरहरु लाई समेट्न सो नाम परिवर्त गरि “नेपाल मगर संघ” नामाकरण गरियो ।
२) वि.सं. २०३८ सालमा नेपाल लंघाली परिवार संघको शाखाहरु केवल २२ जिल्लाहरुमा मात्र समिति थियो । सो विस्तार गरेर ६५ वटा जिल्लामा नेपाल मगर संघको शाखाहरु गठन भयो ।
३) मगर जनजाती संग सम्वन्धीत संघ संस्था मातृ संगठन, प्रोफेशनल संगठन संस्थाहरु गठन गरियो । सौ प्रवासमा पनि नेपाल मगर संघका शाखा इकाई र भातृ संगठन खोल्न मगर समुदाय लाई प्रेरित गरियो । फलस्वरुप विश्व भरि आज मगर संघको विशाल संञजाल स्थापित भएको छ ।
४) प्रथम सहिद कप्तान लखन थापा मगर लाई सर्व सम्मतीवाट केन्द्रीय कार्य समितिले नेपालको प्रथम शहीद घोषणा गरे । तत्पश्चात कप्तान लखन थापालाई प्रथम सहिद घोषणा गर्न नेपाल मगर संघले राज्य माथि दवाव दिन शुरु गरे । फलस्वरुप राज्यले विधिवत उनलाई नेपालको प्रथम सहिद हुन् भनेर घोषणा गरे ।
५. वि.सं. २०४९ सालको नेपाल मगर संघ लाई काठमाण्डौ जिल्ला कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरियो यसरी नेपाल मगर संघको सरकारी औपचारिकता र कानूनी प्रवधान प्राप्त ग¥यो ।
६) मगरहरुको जातीय धर्म वौद्ध धर्म हो भनेर सर्व सम्मति वाट प्रस्ताव पारित गरियो । जातीय पहिचान का लागि मगरहरुको नामको पछाडी “मगर” शब्द लेख्ने अभियान लाई तीव्रता प्रदान गरियो ।
७) मगर समाजमा युगौ देखि व्याप्त सामाजिक कुरीतिहरु, अन्धविश्वास, कुप्रथा आदि त्याग्न, शिक्षा एंव उच्चशिक्षामा मगर विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गर्न तथा मगर महिलाहरुमा शसक्तीकरणको अभियान लाई तीव्रता दिने प्रयास गरियो ।
८) सरकारी संयन्त्रहरुमा तथा शिक्षा क्षेत्रमा आदिवासी जनजाती तथा पिछडिएका समुदायमा प्रतिभाहरुलाई आरक्षण, समावेशी, तथा कोटा प्रणालीको प्रवधानको व्यवस्था गर्न पहल गरियो ।
९) नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ तथा आदिवासी जनजाती प्रतिष्ठान को स्थापना गर्नका लागि पनि खपाङ्गीको पहल उल्लेखनिय रहेको छ । आज दुवै संस्था आदिवासी जनजातीको उत्थान कार्यमा कार्यरत छन् ।
नेपालमा जनमुक्ति बिचार धारा र दर्शनका प्रर्वतक, मगर जनजाति, आदिवासी जनजाती तथा सिङ्गो नेपालीहरुको राष्ट्रिय स्तरमा जननेताको असमायिक स्वर्गारोहण २०७३ साल भाद्र १२ गतेमा भयो । सारा नेपाली तथा आदिवासी जनजातीहरु दुःखी र शोकाकुल भए । आफ्नो अभिभावक सरंक्षण र नेता विहीन भए । राज्यवाट पनि अन्तिम सम्मान प्रदान गरियो ।
गोरे बहादुर खपाङ्गीको पार्थिव शरिर यस भौतिक संसारमा रहेन । तै पनि उनको राजनीतिक र सामाजिक दर्शन तथा बिचार धाराको प्रवाहमा कुनै किसिमका रोकावट र शिथिलता देखिदैन । जनमानसमा अझ वढी उत्तधारणको विस्तृतीकरण एवं विस्तार देखिएको छ । उनले प्रतिपादित गरेका सिद्धान्त आदिवासी जनजातिका युवा वर्गका लागि प्रेरणा बन्न गएको छ । कतिपय विद्वन बुद्धिजीवी व्राम्हण र क्षेत्रीहरु पनि जनजातीय पहिचानका वकालत गर्न थालेका छन् । पुस्तक प्रकाशन वा लेख उनीहरुबाट प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।
त्यसै लागि प्रध्यापक हरेन लेख्नु हुन्छ " He was towering figure of the indiginious peoples movemetn in Nepal. Today his influence can be felt among the ethenic communities of north east India and Buhtan also." (एै)
खपाङ्गी फाउन्डेशन (२०७३ असार ५ गते)
विगतको ऐतीहासिक तथ्यहरुले प्रमाणित गरि सकेको छ सदियौ देखि ठूलो जनसंख्यााम रहेका आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी तथा सीमान्कृत जनजाती माथि राज्य सक्तामा उत्पिडिन एवं शोषण गर्दै आएको छ । तसर्थ जातीय समस्या समाधान सामान्य ढंगले गर्न सकिदैन । साम्प्रादायिक पहल हो भनेर राज्य भाग्न मिल्दैन र सक्दैन । त्यसै लागि समय समयमा खपाङ्गी भन्नु हुन्थ्यो “ जव सम्म उत्पीडित जातिको राज्य सक्तामा साझेदारी हुन्न तबसम्म जातीय समस्याको समाधान हुदैन ।” अतः गोरे बहादुर फाउण्डेशन ले निम्न लिखित कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।
क) शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को विस्तारका लागि सके सम्म मगर विद्यार्थीहरुलाई छात्रावृत्रि उपलब्ध गराउने ।
ख) प्रशासनिक, प्राविधिक, व्यवस्थापन र नेतृत्व विकास का तालीम संचालन गर्ने
ग) गोरे बहादुर खपाङ्गी को वहुयामिक व्यक्तित्व माथी अन्र्तक्रिया गर्ने ।
घ) मगर जनजाति, आदिवासी, तथा जातीय समस्या माथि पुस्तक, पुस्तिका पकाशन गर्ने गराउने ।
ङ) राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सबै जात, जनजाति समूहको सहभागिता र सहकार्य गराउन तथा लैगिक, जातीय, तथा क्षेत्रिय हिसाबले राजनीतीलाई समावेशी बनाउन खपाङ्गी फाउन्डेशनले बौद्धिक अन्र्तक्रिया संचालन गर्न गराउन सक्दछ ।
च) खपाङ्गीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहलले गर्दा नेपाली राजनीतिमा “सामानुपातिक” तथा “संमावेशी” यी दुईवटा शब्दको प्रयोग हुनु पनि परिवर्तनको उपलब्धी मान्न सकिन्छ । यसै क्रममा नेपाली राजनीतिमा पहिचान वादी धारा पनि सशक्तरुपमा उदाएको देखिन्छ । खपाङ्गीको नेतृत्व वि.स. २०६९ सालमा स्थापित “लिबरल डेमोक्रेसी पार्टीले पहिचावादि राजनीतिक पार्टीहरुका बीच समन्वय, सम्पर्क एंव एकीकरणका लागि आवश्यक भूमिका खेल्न सक्दछ ।
छ) खपाङ्गी फाउन्डेशनले सैद्धान्तिक एंव दार्शनिक आधारहरु उक्त पहिचानवादी राजनीतिका लागि तयार पार्न सक्दछ । खपाङ्गीले भन्नु हुन्थ्यो “कलम चलाउन हुने महानुभावहरुले यस्को साङ्गो पाङ्गो कार्य छुन्, केलाउनु, अध्ययन गर्नु आफ्नो धर्म मान्दा अत्युक्ति नहोला” , एक जना विद्वानको भनाई छ“आफ्नो इतिहास उत्पत्ति र सस्कृति वारे जानकारी नहुने व्यक्ति जडो विनाको रुख जस्तै हो ।”
राज्य सक्ताले (जे जस्तो) आदिवासी जनजाति समुदाय, मधेशी र दलित माथि ऐतीहासिक सामाजिक उत्पीडन, विभेद, थिचोमिचो शोषणा र अन्याय गरेको छ । तै पनि जनस्तरमा सदियो देखि विभिन्न समुदाय, जातजाति, वर्ग वर्ण र जातीय समुहमा आ आपसमा अत्यन्त सामजस्य, सदभाव, सहकार्य, सहयोग, समन्वय सनिकटता, समीपता, समुधर सम्बन्ध, मिलन, एवं मेलमिलाप हुनु नै नेपाली समाजको विशिष्ठता हो । जुन दक्षिण एशिया मुलुकहरु सामान्यतः देख्न सुन्न पाइदैन ।
गतअंकको लेखहरु > http://www.rajyasatta.com/analysis/12866-2018-07-07-06-07-19
Last Updated on Friday, 20 July 2018 15:29
सामाजिक उत्पीडनलाई संधैका लागि समाप्त पार्न चर्को आवाज उठाउने पहिलो नेता खपाङ्गी नै थिए !
चीनले राजनीतिक विकासमा नाटकीय परिवर्तन गरेको देखिन्छ !
ओली अलि रिलेक्सका लागी चाईना गएका हुन ।